Ice skating - omunye ukuzijabulisa ozithandayo izingane kanye nabantu abasha kanye umdlalo ethandwa kakhulu. Ukutholakala ezinamasondo egijima ehlobo, wenza Yinto ehlala isenzeka yini nakakhulu e uquqaba Russian. Nokho, ungakhohlwa ukuthi ngezikhathi ezithile abasubathi ukuthi wasebenzisa igama elithi "imishini" idinga ezinye ukunakekelwa, ngaphandle kwalokho isizini ezayo, kungase usuyaphila yaphela indaba yalo. Kubonakala sengathi ahlinzekwa iziyalezo zendlela anakekele amahhashi, kuyasiza eziningi bemizimba imfundamakhwela, bemizimba nabalandeli nje ukugibela kwabo. Lapha ungathola amathiphu kanjani wazibonela yabadlali kanye abaculi wahlanganyela ekulungiseni.
Imiyalelo indlela yokunakekela amahhashi, la macala
Akukho nzima ukwenza ungenalo ukuba. Umsebenzi main - ukuvikela izindwani kusukela rusting nezicathulo - kusukela ukusonteka. Futhi ngokwedlulele elula ukwenza, uma njalo alandele le mithetho:
skates Dry kuphela ezimweni obucayi, kude evulekile ilangabi noma Ukushisa radiators. Ngosuku, okuyinto okukuhlukanisa Amazing kokulandelayo (uma ugibele nsuku zonke), bayoba nesikhathi sizomele. Futhi lokhu isihlangu ngeke kuze kuthinteke. Uma ungabaza mayelana isikhathi, zisebenzisa dryers kagesi for izicathulo, ezibekwe ngaphakathi.
Carry skates kudingeka ihlanganisa kuphela izindwani - lokhu kuzovimba ingozi yokulimala. Nokho, ngokushesha nje lapho sifika ku rink noma ikhaya, susa njalo izembozo. Futhi esikhwameni ukuthwala skates kufanele ngokushesha ukuyikhipha - abagcine khona yingozi unomphelo "impilo" yokusungula.
Skating ngempela moisturizes blade. Ngakho-ke, ngemva kokuqeda ukuqeqeshwa, badinga qiniseka Sula - ngisho alahlwayo iphepha amathawula. Futhi lapho efika ekhaya, ukuphinda ngokucophelela inqubo has a ezomile, indwangu ethambile.
Njengoba ubona, ukunakekelwa nsuku zonke zazingavumi kahle futhi bengenalo iyatholakala ngisho ingane. Uma umndeni wakho ku-izinyane isikeyiti, simfundise banakekele yokusungula kusukela osukwini lokuqala, kodwa siqiniseke ukuthi akazange usike yena esesula izindwani.
Ngokuhamba kwesikhathi, "isihlibhi ingxenye" Ngokuqinisekile blunts. Ikakhulukazi ngokushesha lokhu kwenzeka Wabasaqalayo, ice engazinzile. Ngakho-ke, iziqondiso zendlela anakekele amahhashi, kuhlanganisa ulwazi mayelana imimese kubo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi inhloso yale nqubo iwukuba hhayi ukwandisa kobukhulu izindwani, kanye nokubuyiselwa anemifantu kubo lapho, uma iqhathaniswa ukushushuluza. Ngaphandle express inkatho ihhashi uzobe zigcwaliswe, kuhlelenjwe amphoqe noma ubambe ibhalansi kuyofika ngakho.
Ngiyaqonda ukuthi kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba imimese, ilula: uthole iqakala ukhathele futhi ndikindiki. Ukuze wenze lokhu akutuseki kakhulu ngokwakho: lokhu kumele kwenziwe ngobuciko, wena nje lokudlela up isimo, futhi kusadingeka ukuya professional. Ukulola blade kungaba isikhathi esithile, ngemva kwalokho ngeke kudingeke zishintshe. Njengoba ayesethole wahlanganyela isenzo esizimele, wena umane ukunciphisa isikhathi sempilo yabo.
Uma ukugibela kuphela ice evulekile, futhi ehlobo unezinye izinhlelo, kudingeka siqiniseke ukuthi yokusungula yakho "ukuphila" kuze kube isizini ezayo. Imiyalelo indlela yokunakekela amahhashi, uncoma lezi zinyathelo:
Boots esiphezulu uvalwe eyayigcwele ngephepha. Uma une izicathulo ezikhethekile ihlala - bawafake. Akukubi futhi abeke ngaphakathi izikhwama hygroscopic - bayohlala ukuvimbela ukunqwabelana umswakama.
izicathulo Ngaphandle kukhona nivame kahle nge ongahluziwe jelly noma upholishi wezicathulo (ngisho noma zingekho lesikhumba).
Blades okunamafutha kusetshenzwe uwoyela yezihlanganisi noma lithologic.
ihhashi ngamunye zihambisana ephepheni esindayo (iphephandaba uzokwenza, nje kufanele zihambisana izingqimba eziningana) noma ibekwe ebhokisini amakhadibhodi.
Ukugcina kwabo skates igcwele kudingeka endaweni emnyama lapho ezomile kakhulu. Canned ngakho ukuzabalaza ngaphandle kwezinkinga kuze isizini ezayo.
Yini odinga ukuyazi mayelana roller
Ama-roller - nayo skates, ngisho version ehlobo. Ngomqondo othile, iyinkimbinkimbi nakakhulu design kuka sibonelo we ebusika. Futhi ukuze ujabulele isikhathi eside nabo, kudingeka wazi indlela yokunakekela amahhashi. imfundo omfushane libukeka kanje:
Sula izicathulo kusuka ukungcola nothuli.
Njalo qinisa fasteners.
Shintsha amasondo ezindaweni, ngokulandela imiyalelo exhunywe ezinamasondo.
Imiyalelo indlela yokunakekela amahhashi, kungaba ebusika noma ehlobo okufana yalo, ilula futhi akudingi mzamo okuningi - kuphela ukunakekelwa futhi njalo. Uma ulandela ke, yakho imishini ezemidlalo oyohlala isikhathi eside kakhulu, futhi entsha akanayo ukuthenga iminyaka. Lokhu kuhle kakhulu, ngoba amahhashi ibiza kakhulu.
Isigodlo Ezemidlalo e Krylatskoye: indawo, umthamo
Alcohols Ukulungiselela: Izindlela kanye Ukusingathwa kwendle, ukungcola
Okuchaza ukudansa ephusheni? Dream ncwadi kuyobe ngiyisho nokuthi sitshele.